Fisolokoiana :: Mpivady enjehina noho ny fisandohana ho polisy • AoRaha
Fisolokoiana Mpivady enjehina noho ny fisandohana ho polisy
Voampanga amin’ny firaisana tsikombakomba tamin’ny fisolokiana olona ireto mpivady tany Avaratsena Soavinandriana. Nisandoka ho polisy ary milaza ny afaka mampiditra mpianatra ho polisy ilay lehilahy. Natolotra ny Fitsarana tany Miarinarivo izy mivady ireo sy ny vehivavy iray, omaly. Naiditra am-ponja vonjimaika ilay lehilahy. Nahazo fahafahana saingy arahin’ny Fitsarana maso kosa ireo roa vavy.
Lehilahy iray no lasibatr’ireto mpisoloky. Tafaresaka tamina olona mitonona ho polisy io lehilahy io, ka resy lahatra tamin’ny fanomezana volabe ho sandan’ny fampidirana azy ho polisy. Nandeha ny fifampiresahana sy ny fikarakarana ny taratasy. Nitaky volabe iretsy mpisandoka. Azon’izy ireo ny vola roa tapitrisa ariary, nialoha ny nanjavonany.
Nametraka fitoriana tany amin’ny Kaomisarian’ny polisy Soavinandriana ilay lasibatra. Tratra tamin’ny vela-pandrika nataon’ny mpitandro ny filaminana io mpisoloky io sy ny vehivavy roa. “Nilaza ho polisy miasa eto Soavinandriana ary efa nahatafiditra olona maro ho polisy ilay lehilahy. Manasonia ny taratasy sandoka rehetra ampiasaina ny vadiny. Ilay vehivavy faharoa indray nokaramaina handresy lahatra ny olona hofitahina sady maka ny vola”, hoy ny tatitra nataon’ny officier de police Razanajatovo Tsiorinirina, lehiben’ny kaomisarian’ny polisy any Soavinandriana.
05/06/2021 à 10:51
tokony ho mahazo sazy koa le vosoloky .Antony Kolikoly zany. Raha hanao polisy mandehana am’laverte fa hampanjaka ny laverte e! examin atao tasara
Tambajotran-jiolahy :: Nisambotra mpaka an-keriny enina ambin’ny folo mianadahy ny zandary